MM Dhagaxbuur Iyo Munaasabadii Xuska 19aad Ee XDSHSI - Cakaara News
MM Dhagaxbuur Iyo Munaasabadii Xuska 19aad Ee XDSHSI
Dhagaxbuur (Cakaaranews) Talaado 7da March 2017. Munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay islamarkaana lagu xusayay sanad-guurada 19aad ee kasoo wareegtay aasaaskii XDSHSI oo ay kasooqaybgaleen Hogaan -kuxigeenka Xafiiska Nabadgalyada Maamulka iyo Cadaalada DDSI mudane ibraahin maxamuud mubaarakkusimaha Gudoomiyaha Gobolka Jarar ahna Gudoomiyaha XDHSI ee Gobolka Jarar mudane shugri xasan khaliif, Maayorka Maamulka Magaalada Dhagaxbur mudane muxumed xasn sufi iyo .
Hadaba, munaasabada ayaa waxaa ugu horayn kahadlay hogaan kuxigeenka xafiiska nabadagalyada, Maamulka iyo cadaalada mudane ibraahim maxamuud mubaarik oo ugu horayn salaam usoo jeediyay dhamaan kaqaybgalayaasha kasoo qaybgashay xafladan ee ku dhaqan magaalada dhagaxbuur. Wuxuuna si qoto dheer uga hadlay guulaha balaadhan ee uu soo hooyiy XDSHSI isagoo taabtay dhinacyada horumarka, nabadgalyada iyo maamulkasuuban. Hogaan kuxigeenka oo hadalkiisa sii wata ayaa tilmaamay sida ay hogaaminta deegaanku u leeyihiin kagonaansho iyo daacadnimo. Wuxuuna si gaar ah u tilmaamay madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi maxamuud Cumar sida uu habeen iyo maalinba ugu taagan yahay danta bulshada deegaanka islamarkaana uu ugu taamayo sidii bulshada deegaanku uga bixi lahayd saboolnimada. Wuuxuuna ilaaahay uga baryay bulshada deegaanka in abaarta alle kasaaro roobab khayrqaba oo dagdag ahna alle siiyo.
Dhanka kale, kusimaha Gudoomiyaha Gobolka Jarar ahna Gudoomiyaha XDHSI ee Gobolka Jarar mudane shugri xasan khaliif oo isna madasha ka hadlay ayaa xusay in uusan hadal kusookoobi Karin guulaha XDSHSI islamarkaana qofkasta oo deegaanka kunool uu kadharagsan yahay farqiga udhaxeeya maanta iyo shalay. Wuxuuna mahadcelin baalaadhan usojeediyay dhamaan kaqaybgalayaasha soo buux dhaafiyay hoolka shirarka iyo waliba kooxaha fanka iyo suugaanta oo heeso gubaabaha halkaas usoobandhigay.
Sidookale, Maayorka Maamulka Magaalada Dhagaxbuur Mudane Muxumed Xasan Suufi oo kahadlay munaasabadan ayaa sheegay in xafladani aytahay mid lagu maamusayo sanadguurada 19aad ee kasoo wareegtay aasaaska XDSHSI. Wuxuuna si balaadhan uga hadlay guulaha 28 ka yakaatiit ee XDSHSI. Wuxuuna si gaar ah uga hadlay guulaha lagaadhay 10 kii sano ee udanbeeyay ee dhinacyada horumarka iyo nabadgalayda siyaasada horumarineed ee XDSHSI, iyo waliba dhinacyada kaabayaasha dhaqaale. Wuxuuna carabka ku adkeeyay maayarku in waxyaabaha uu kasoo hadalay aysan ku imanin ciyaar ee ay ku timid halgan adag islamarkaana ay lagama maarmaan tahay in shacabku ilaashadu.
Ugudanbayna bulshadi kasoo qaybgashay munaasabada dareenkooda kahadlay ayaa tilmaamay in ay aad ugu faraxsanyihiin kasooqaybgalka munasabadan islamarkaana ay taageeraha XDSHSI ay ku muujinayaan farxadiyo raynrayn. Iyagoo halkdhagna kadhigtay hawaaro XDSHSI. Hanoolaado XDSHSI.